गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » ४५ मिनेटसम्म सुटकेसमा बन्द नायिका शाहले खोलिन राज !
काठमाडौ । यदि तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेका विषयवस्तुहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ भने टिभी सिरियल इश्कमें मरजावां २ को सुटकेस सिन जरुर देख्नुभएको होला। उक्त सिनमा नायिका हेली शाह आफ्नो कोठाबाट निस्केर आउँछिन् र चिप्लिएर भित्तामा ठोक्किन पुग्छिन्। अनि बेहोस भएर एउटा सुटकेसमा खस्न पुग्छिन्। त्यसपछि कसैले उनलाई सुटकेससहित उठाएर पानीमा फालिदिन्छ।
सुटकेस सिनपछि धेरैको प्रतिक्रिया पाएँ। मलाई थाहा छैन कसरी ? तर म पहिलो सुटकेसमा नै फिट भएँ। जुन सेटमा ल्याइएको थियो।
मैले एकदमै गह्रौं लेहेङ्गा लगाएकी थिएँ तैपनि म सुटकेसमा अटाएँ। तर यसको मतलब यो होइन कि, त्यो सबै काम सजिलो थियो। म त्यस सुटकेसमा ४५ मिनेटसम्म खुम्चिएर, बाङ्गिएर बसेँ। त्यहाँबाट निस्किएको धेरै दिनसम्म मेरो गर्दन बेस्सरी दुखिरह्यो।” हल्का टिप्पणी गरिरहनु भएकाले सायद मेरो यो मेहनतलाई सम्मान गर्नुहुन्छ होला ।